2004 – Year – Alpha Premium
Kyun…! Ho Gaya Na (2004) (App member only) ##unicode ကဲ ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ "Kyun Ho Gaya Na(2004)"ဆိုတဲ့အိန္ဒိယဇာတ်ကားလေးပါ။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ မင်းသားကြီး "Amitabh Bachchan"လည်း ပါဝင်ထားပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်ရှုရမဲ့ အချစ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီယာဟာ အမေဆုံးပါးသွားပြီးနောက် အဖေ့ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ကောင်မလေးပါ။ သူဟာ သွက်သွက်လက်လက်လည်းရှိပြီး လူကြီးတွေစီစဉ်ပေးတဲ့လက်ထက်ပွဲမျိုးကို လက်မခံပဲ သူကိုယ်တိုင်ချစ်ရမဲ့သူရှိလာမှသာ လက်ထက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ အာဂျွန်ကတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေတတ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ ဒီယာနဲ့ဆန့်ကျင်စွာပဲ သူကတော့ လူကြီးမိဘတွေစီစဉ်ပေးတဲ့လက်ထက်ပွဲကိုပဲလက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တယ်။ ဒီယာရဲ့အဖေနဲ့ အာဂျွန်ရဲ့မိဘတွေဟာလည်း မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတယ်။ တစ်နေ့တော့ ဒီယာဟာ စာမေးပွဲဖြေစရာရှိတဲ့အတွက် အာဂျွန်တို့အိမ်မှာ ခေတ္တနေထိုင်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲ....ဒီယာနဲ့အာဂျွန်တို့ ပိုပြီးခင်မင်ရင်းနှီးလာရာကနေ....... သူတို့ရဲ့အချစ်နဲ့လက်ထက်ထိမ်းမြားချင်းအပေါ်မှာထားရှိတဲ့အမြင်တွေဟာ ဘယ်လိုများဆက်ဖြစ်သွားမလဲ၊ ဒီယာရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကရော ဘယ်လိုတွေပါဝင်ပတ်သက်လာမလဲ၊ ဒီယာနဲ့အာဂျွန်တို့ဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အဆင်ပြေပြေချစ်သွားနိုင်ကြပါ့မလားဆိုတာ ဇာတ်ကားထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော်။ ##zawgyi ကဲ ဒီတစ္ခါ တင္ဆက္ေပးထားတဲ့ ဇာတ္ကားကေတာ့ "Kyun Ho Gaya Na(2004)"ဆိုတဲ့အိႏၵိယဇာတ္ကားေလးပါ။ ဒီဇာတ္ကားထဲမွာေတာ့ မင္းသားႀကီး "Amitabh Bachchan"လည္း ပါဝင္ထားၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါးၾကည့္ရႈရမဲ့ အခ်စ္ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီယာဟာ အေမဆုံးပါးသြားၿပီးေနာက္ အေဖ့ရဲ႕ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္မွာရွိေနခဲ့တဲ့ေကာင္မေလးပါ။ သူဟာ သြက္သြက္လက္လက္လည္းရွိၿပီး လူႀကီးေတြစီစဥ္ေပးတဲ့လက္ထက္ပြဲမ်ိဳးကို လက္မခံပဲ သူကိုယ္တိုင္ခ်စ္ရမဲ့သူရွိလာမွသာ လက္ထက္မယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။ အာဂြၽန္ကေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေနတတ္တဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ပါ။ ဒီယာနဲ႔ဆန္႔က်င္စြာပဲ ...
IMDB: 4.2/10 1,798 votes
Lakeer: Forbidden Lines (2004) (App member only) ##unicode နာမည်ကြီးမင်းသား John Abrahamပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး နာမည်ကျော်Sunny Deolနဲ့ Sunil Shettyတို့ရဲ့ ဇာတ်ကားဟောင်းတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် နာမည်ကျော်တွေရဲ့ငယ်ရုပ်တွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရမယ် အချစ်အက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းမို့ ခံစားချက်မျိုးစုံ အက်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းကောင်းတွေကိုပါ အားပါးတရကြည့်ရူရဦးမှာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဆွေမျိုးမိဘမရှိတဲ့တစ်ကောင်ကြွက် အာဂျွန်ဟာ အာဂျွန်ရာနာဟာ သူ့ကိုမြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့ ဘာဘာကို အဖေတစ်ယောက်လိုလေးစားချစ်ခင်ခဲ့ပါတယ် ဘာဘာဆုံးသွားတော့ ဘာဘာရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသား ကာရန်ကို သူ့ညီအရင်းလိုသတ်မှတ်ပြီးစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ် ဒါ့အပြင် သူ့အတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့လူရဲ့သမီးဖြစ်သူ ဘင်ဒရာကိုလည်း သုံးနှစ်သမီးအရွယ်ကတည်းက ညီမအရင်းလေးလိုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာပါ အာဂျွန်ဟာ တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေမယ့် စိတ်ထားကောင်းမွန်တာကြောင့် လူတိုင်းက သူ့ကိုလေးစားချစ်ခင်ကြပါတယ် ဒီအထဲမှာ ဆန်ဂျူးလည်းအပါအဝင်ပေါ့ ဆန်ဂျူးကလည်း သူ့ညီ ဆာဟီးကို သိပ်ချစ်ပြီး အာဂျွန်ကိုအရမ်းလေးစားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ ဆာဟီး၊ ကာရန်နဲ့ဘင်ဒရာက ကောလိပ်တစ်ခုတည်းတတ်တဲ့အချိန်မှာ လူငယ်တို့သဘာဝချစ်ကြိုက်မိပြီး သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ညီနှစ်ယောက်ရန်ပွဲတွေဖြစ်လာတော့ အစ်ကိုတွေဖြစ်တဲ့ အာဂျွန်နဲ့ဆန်ဂျူး ဘယ်လိုပြဿနာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့ရမှာပါ ဒီဇာတ်ကားက လူ့ခံစားချက်တွေကိုအသားပေးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ တကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းမယ့်ဇာတ်ကားတစ်ကားပါပဲ ကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi နာမည္ႀကီးမင္းသား John Abrahamပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၿပီး နာမည္ေက်ာ္Sunny Deolနဲ႔ Sunil Shettyတို႔ရဲ႕ ဇာတ္ကားေဟာင္းတစ္ကားကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ နာမည္ေက်ာ္ေတြရဲ႕ငယ္႐ုပ္ေတြကိုလည္းျမင္ေတြ႕ရမယ္ အခ်စ္အက္ရွင္ဇာတ္ကားေကာင္းမို႔ ခံစားခ်က္မ်ိဳးစုံ အက္ရွင္ဇာတ္ဝင္ခန္းေကာင္းေတြကိုပါ အားပါးတရၾကည့္႐ူရဦးမွာပါ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ေဆြမ်ိဳးမိဘမရွိတဲ့တစ္ေကာင္ႂကြက္ အာဂြၽန္ဟာ အာဂြၽန္ရာနာဟာ သူ႔ကိုေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးခဲ့တဲ့ ဘာဘာကို အေဖတစ္ေယာက္လိုေလးစားခ်စ္ခင္ခဲ့ပါတယ္ ...
IMDB: 4.4/10 969 votes
The Librarian I: Quest for the Spear (2004) (App member only) ##unicode အခု ကြည့်ရှုရမဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ "The Librarian: Quest for the Spear" ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ဇာတ်ဆောင်"ဖလင်း" စာကြည့်တိုက်မှူးဖြစ်ပြီးနောက် လုပ်ဆောင်ရတဲ့ ပထမဆုံးစွန့်စားခန်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ။ ဇာတ်ကားထဲမှာတော့.... ထက်မြတ်ပြီး စာဖတ်ရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဖလင်းဟာ စာကြည့်တိုက်မှူးအဖြစ် အင်တာဗျူးဖြေဖို့ ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဖလင်းဟာ စာကြည့်တိုက်မှူးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ထင်သလောက်မရိုးရှင်းမှန်းသိရှိသွားပြီး ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ပစ္စည်းတွေကို စောင့်ရှောက်ရတဲ့အလုပ်မှန်းနားလည်သွားပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့်ပဲ...ရှေးဟောင်းလှံတံအခိုးခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာ ဖလင်းဟာ လှံကိုရှာဖွေဖို့ရန်အတွက် စွန့်စားခန်းဖွင့်ဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဖလင်းကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက် နီကိုးလ်လိုခေါ်တဲ့ ကိုယ်ခံပညာကျွမ်းကျင်တဲ့အမျိုးသမီးလေးကိုလည်း စာကြည့်တိုက်က စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖလင်းနဲ့နီကိုးလ်တို့ဟာ လေယာဉ်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအနှောက်အယှက်ပေးသူတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့..... သူတို့ဟာ အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ကြမလဲ၊ အလုပ်တာဝန်ကိုအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာ ဇာတ်လမ်းထဲမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းဟာ Fantasy, Action, Adventure type ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်၊ရင်ထိတ်ဖွယ်၊ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခံစားချက်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်တာဖြစ်လို့ လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရှုလိုက်ကြပါ။ ##zawgyi အခု ၾကည့္ရႈရမဲ့ ဇာတ္ကားကေတာ့ "The Librarian: Quest for the Spear" ဆိုတဲ့ဇာတ္ကားေလးပါ။ ဒီဇာတ္ကားထဲမွာေတာ့ ဇာတ္ေဆာင္"ဖလင္း" စာၾကည့္တိုက္မႉးျဖစ္ၿပီးေနာက္ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ပထမဆုံးစြန္႔စားခန္းကိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမွာပါ။ ဇာတ္ကားထဲမွာေတာ့.... ထက္ျမတ္ၿပီး စာဖတ္ရတာကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ဖလင္းဟာ စာၾကည့္တိုက္မႉးအျဖစ္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဖို႔ ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုနဲ႔ ဖလင္းဟာ စာၾကည့္တိုက္မႉးအျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ...
IMDB: 6.3/10 18,886 votes
The Librarian I: Quest for the Spear (2004)
R-Point (2004) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၁၉၇၂ခုနှစ် ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာကျဆုံးသွားတဲ့လူတွေ သရဲခြောက်တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် တစ်နေ့ R-pointမြေမှာသေသွားပြီလို့ယူဆထားတဲ့တပ်စိတ်က ရေဒီယိုကနေဆက်သွယ်လာခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့် သူတို့ကိုရှာဖို့အတွက် ဗိုလ်ကြီးချွဲဦး‌ဆောင်တဲ့တပ်စိတ်က R-pointကိုသွားဖို့ တာဝန်အပေးခံခဲ့ရပါတယ် သူတို့ အဲဒီနေရာကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်လောက်ပုပ်သိုးနေတဲ့အလောင်းနဲ့အတူ မသေမရှင်ဖြစ်နေတဲ့ ဗီယက်နမ်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ် အဲဒီအမျိုးသမီးကို သူတို့ပစ်ထားခဲ့ပြီး ဆက်ခရီးဆက်လာကြပါတယ် အဲဒီနောက် ကျောက်တိုင်တစ်ခုကို ထပ်တွေ့ခဲ့ပြီး ကျောက်တိုင်ပေါ်ကစာကတော့ ဒီနေရာမှာ တရုတ်တွေက ဗီယက်နမ်တွေကိုသတ်ပြီး ရေကန်ထဲပစ်ထားခဲ့ကြောင်း ဒီနေရာမှာ လက်သွေးပေခဲ့ရင် ပြန်သွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့စာမျိုးဖြစ်ပြီး ခြောက်ခြားဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ R-pointကိုရောက်ကတည်းက ထူးဆန်းနေတာတွေ ဆက်တိုက်ကြုံလာခဲ့ရတာပါတစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်လူလိုလို သေသွားတဲ့စစ်သားတွေလိုလို မှားမြင်ရပြီး အမေရိကန်စစ်သားတွေကပါ ညဘက်ကြီး သူတို့ဆီရောက်လာခဲ့ပါသေးတယ် R-pointက လူတွေအများကြီးသေခဲ့တဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရတဲ့အတွက် ဗိုလ်ကြီးချွဲတို့တပ်စိတ် ဘယ်လိုအခြောက်လှန့်ခံရမလဲ အသက်ရှင်လျှက် အဲဒီနေရာကထွက်လာနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ၁၉၇၂ခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲမွာက်ဆုံးသြားတဲ့လူေတြ သရဲေျခာက္တဲ့အေၾကာင္းကို႐ိုက္ကူးထားတဲ့ အေတာ္စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဇာတ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္ တစ္ေန႔ R-pointေျမမွာေသသြားၿပီလို႔ယူဆထားတဲ့တပ္စိတ္က ေရဒီယိုကေနဆက္သြယ္လာခဲ့ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကိုရွာဖို႔အတြက္ ဗိုလ္ႀကီးခြၽဲဦး‌ေဆာင္တဲ့တပ္စိတ္က R-pointကိုသြားဖို႔ တာ၀န္အေပးခံခဲ့ရပါတယ္ သူတို႔ အဲဒီေနရာကိုေရာက္ေရာက္ခ်င္းမွာပဲ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီး တစ္ပတ္ေလာက္ပုပ္သိုးေနတဲ့အေလာင္းနဲ႔အတူ မေသမရွင္ျဖစ္ေနတဲ့ ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီးကိုေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးကို သူတို႔ပစ္ထားခဲ့ၿပီး ဆက္ခရီးဆက္လာၾကပါတယ္ အဲဒီေနာက္ ေက်ာက္တိုင္တစ္ခုကို ...
IMDB: 6.3/10 5,340 votes
Torque (2004) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Biker တွေအကြိုက်ဖြစ်စေမယ့် အမိုက်စားအက်ရှင်တွေနဲ့ ဆိုက်ကယ်စတန့်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖာဒ်ဆိုတဲ့ ဘိုက်ကာ တစ်ယောက်က သူကျင်လည်ရာနေရာကနေ ရုတ်တရက် ဘယ်သူ့ကိုမှ အသိမပေးပဲ ထိုင်းမှာရှောင်တိမ်းနေရာကနေ ပြန်ရောက်လို့လာပါတယ် သူနဲ့အတူပါလာတဲ့အရာတွေကတော့ ပြဿနာတွေပါပဲ ရောက်လေရာမှာပြဿနာဖြစ်ပြီး ဘိုက်ကာ ဂိုဏ်းတစ်ခုနဲ့လဲ ရန်ညိုးရှိနေပါသေးတယ် သူပြန်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ သူရဲ့ချစ်သူလေးကြောင့်ပါ ဒါပေမယ့် သူ့နောက်ကပါလာတဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့် သူ့ချစ်သူရော သူ့သူငယ်ချင်းတွေရော အားလုံး ပြဿနာတက်ကုန်ပါတယ် ဖာဒ်မှာရှိတဲ့ပြသနာတွေက ဘယ်လိုပြဿနာတွေလဲ ဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်မှအရသာရှိမှာမို့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဦးနော် နာမည်ကြီး rapper Ice Cube ကောပါတဲ့ အက်ရှင်ကားကောင်း လေးတစ်ခုကို ခံစားလိုက်ပါအုံး။ ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ Biker ေတြအႀကိဳက္ျဖစ္ေစမယ့္ အမိုက္စားအက္ရွင္ေတြနဲ႔ ဆိုက္ကယ္စတန္႕ကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဖာဒ္ဆိုတဲ့ ဘုိက္ကာ တစ္ေယာက္က သူက်င္လည္ရာေနရာကေန ရုတ္တရက္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ အသိမေပးပဲ ထိုင္းမွာေရွာင္တိမ္းေနရာကေန ျပန္ေရာက္လို႕လာပါတယ္ သူနဲ႕အတူပါလာတဲ့အရာေတြကေတာ့ ျပႆနာေတြပါပဲ ေရာက္ေလရာမွာျပႆနာျဖစ္ၿပီး ဘိုက္ကာ ဂိုဏ္းတစ္ခုနဲ႕လဲ ရန္ညိဳးရွိေနပါေသးတယ္ သူျပန္လာရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ သူရဲ႕ခ်စ္သူေလးေၾကာင့္ပါ ဒါေပမယ့္ သူ႕ေနာက္ကပါလာတဲ့ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ သူ႕ခ်စ္သူေရာ သူ႕သူငယ္ခ်င္းေတြေရာ အားလံုး ျပႆနာတက္ကုန္ပါတယ္ ဖာဒ္မွာရွိတဲ့ျပသနာေတြက ဘယ္လိုျပႆနာေတြလဲ ဆိုတာကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ၾကည့္မွအရသာရွိမွာမို႕ ဆက္လက္ၾကည့္ရွဳလိုက္ပါဦးေနာ္ နာမည္ႀကီး rapper Ice Cube ေကာပါတဲ့့ အက္ရွင္ကားေကာင္း ေလးတစ္ခုကို ...
IMDB: 4.1/10 26,887 votes
Turtles Can Fly (2004) ##unicode အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ... ဒီတစ်ခေါက် အားလုံးအတွက် ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ကားလေးတစ်ကားကတော့ Turtles can fly ဆိုတဲ့ War Drama ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်...ဒီကားလေးက ၂၀၀၄ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ကားလေးဖြစ်ပြီး တူရကီ အီရတ် နယ်စပ်ဒေသက ရွာတစ်ခုနဲ့ ကာဒီစတန်(အီရန်ဘက်ခြမ်း)ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာ အခြေတည်ပြီးရိုက်ကူးထားတာပါ..အချိန်ကတော့ အမေရိကန်တွေ အီရတ်စစ်ပွဲ မဖြစ်ခင် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အလိုလောက်ကပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. အဲ့ဒီနေရာမှာ စတလိုက်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ် သူက အဲ့ရွာက ကလေးတွေနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေထဲက ကလေးတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင် လုပ်ပြီး ကလေးတွေကို အလုပ်ပေးနေတဲ့သူပေါ့..မိုင်းမြေတွေက မပေါက်သေးတဲ့ မိုင်းတွေကို ကလေးတွေနဲ့ အတူ လိုက်စုပြီး ပြန်ရောင်းတယ်..နောက်ပြီး ရွာသားတွေအတွက်တီဗီတိုင်တွေကိုလည်း လိုက်ဆင်ပေးတယ်....ပြီးတော့ သူက အင်္ဂလိပ်စကားလည်း မတောက်တစ်ခေါက် ပြောတတ်တယ်...အဲ့လိုနဲ့တစ်နေ့မှာ နယ်စပ်ကို ဖြတ်ဖို့လာတဲ့ ဒုက္ခသည်မောင်နှမနှစ်ယောက်ထဲက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့ပြီးချစ်မိသွားရော..သူတို့ကဟာလာဘ်ဂျာကနေလာခဲ့ပြီး ကောင်မလေးရဲ့အကိုနဲ့ သားလည်းပါတယ်..သူတို့နေခဲ့တဲ့ ဟာလာဘ်ဂျာမှာ ဘာသီဆန် စစ်သားတွေကသူ့မိဘတွေကို သတ်သွားတယ် သူ့အကိုကို ...
IMDB: 8.1/10 18,592 votes
The Punisher (2004) ##unicode ဒီတစ်ခါမှာတော့ Marvel's Netflix series ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Punisher ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Marvel series ဆိုပေမယ့် ဒီကားက superhero အကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး သာမန်ရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက် အကြောင်းပါ ဖရန့်ခ်ကာဆယ်လ်ဆိုတဲ့ FBI အေးဂျင့်တစ်ယောက်ဟာ သူ့မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်သွားတဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းတွေကို လိုက်လံရှာဖွေလက်စားချေရင်းလောက ကြီးမှာလူတွေကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေကို ချေမှုန်းတဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် သူ့ကိုယ်သူ မကောင်းတဲ့သူတွေ ကိုအပြစ်ပေးသူ Punisher အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုသုတ်သင်နေပါတော့တယ် Punisher ဟာ superheroဇာတ်ကောင်မဟုတ်ပေမယ့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အက်ရှင်ဇာတ်ကားကြမ်းကြမ်းကိုမှ ကြိုက်တဲ့သူတွေ သဘောတွေ့စေမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ Marvel's Netflix series ထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ The Punisher ဆိုတဲ့ဇာတ္ကားေလးကို တင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ Marvel series ဆိုေပမယ့္ ဒီကားက superhero အေၾကာင္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး သာမန္ရဲဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းပါ ဖရန႔္ခ္ကာဆယ္လ္ဆိုတဲ့ FBI ေအးဂ်င့္တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔မိန္းမနဲ႔ ကေလးေတြကို ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္သြားတဲ့ လူဆိုးဂိုဏ္းေတြကို လိုက္လံရွာေဖြလက္စားေခ်ရင္းေလာက ႀကီးမွာလူေတြကို ဒုကၡေပးေနတဲ့သူေတြကို ေခ်မႈန္းတဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ သူ႔ကိုယ္သူ မေကာင္းတဲ့သူေတြ ကိုအျပစ္ေပးသူ Punisher အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး လူဆိုးဂိုဏ္းတစ္ခုၿပီးတစ္ခုကိုသုတ္သင္ေနပါေတာ့တယ္ Punisher ဟာ superheroဇာတ္ေကာင္မဟုတ္ေပမယ့္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းနဲ႔လက္ေတြ႕က်တဲ့ဇာတ္ေကာင္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ အက္ရွင္ဇာတ္ကားၾကမ္းၾကမ္းကိုမွ ႀကိဳက္တဲ့သူေတြ သေဘာေတြ႕ေစမယ့္ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားလည္း ျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File ...
IMDB: 6.4/10 149,433 votes
Anaconda2: The Hunt for the Blood Orchid (2004) ##unicode အခုဇာတ်ကားက Animal planet တို့ Discovery channel တို့ကြည့်တာကို ကြိုက်တဲ့သူတိုင်း အဲ့အငွေ့အသက်ကို ခံစားရမှာပါ လူခြောက်ယောက်ပါတဲ့ သုတေသနပညာရှင် အသင်းတစ်ခုက ဘောနီယိုထဲက တောရိုင်းထဲမှာ Perrinnia Immortalis လို့ခေါ်တဲ့ ကြက်သွေးရောင် သစ်ခွပန်းကို ရှာဖို့ လှေစင်းလုံးငှားပြီး ထွက်ခဲ့ကြတယ် သူတို့က အဲ့ပန်းမှာပါတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေက လူတွေကို နုပျိုငယ်ရွယ်စေပြီး အသက်ရှည်ရှည် နေနိုင်မယ်လို့ စစ်ဆေးချက်တွေအရ ခန့်မှန်းထားကြတယ် နောက်တစ်နေ့ညရောက်တော့ သူတို့မုန်တိုင်းနဲ့တိုးပြီး မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးပြိုကျနေတဲ့ သစ်လုံးတွေက သူတို့ရဲ့စက်လှေမော်တာကို ထိမိပြီး မောင်းမရတော့ဘဲ ရေတံခွန်ကနေပြုတ်ကျကုန်တာပေါ့ အဲဒီအချိန်ထဲက သူတို့နောက်ကို Anaconda ဆိုတဲ့ ဧရာမ မြွေအကြီးကြီး လိုက်နေတယ်ဆိုတာ တစ်ယောက်မှ သတိမထားမိခဲ့ကြပါဘူး ဒီတော့ သူတို့ လေ့လာရေးခရီးက လမ်းတစ်လျှောက်မှာ အဲဒီAnaconda မြွေတွေနဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သွားမလဲ အောင်မြင်စွာနဲ့ပဲ ပြီးဆုံးသွားမလားဆိုတာ..... ဒီကားကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် လူတွေရဲ့ လိုလောဘက ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုတန်ပြန်သက်ရောက်နိုင်သလဲဆိုတာ ပညာပေးအနေနဲ့ ထည့်ထားပါသေးတယ် ##zawgyi အခုဇာတ္ကားက Animal planet တို႔ Discovery channel တို႔ၾကည့္တာကို ႀကိဳက္တဲ့သူတိုင္း ...
IMDB: 4.7/10 29,098 votes
Anaconda2: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
New York Minute (2004) ##unicode New York Min ဆိုတဲ့ Movie လေးကတော့ Comedy Romance အမျိုးစားဖြစ်ပြီး 2004က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Teen Movieလေးပါ သင်ဟာ Super Natural ရဲ့ အမာခံ ဖန်တစ်တယ်ယောက်ဆို ရင်တော့ ဒီကားလေးကို ကြည့်ကို ကြည့်ဖူးသင့်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဒီကားထဲမှာ Super Natural ထဲက (Sam) မင်းသားJared Padalecki ပါဝင်ထားလို့ပါ ပါးချိုင့်လေးရဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်က ပုံရိပ်လေးတွေကို စိတ်ကြိုက်ငမ်း အဲလေ စိတ်ကြိုက် ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါနော် 🤣 ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းကတော့ လုံးဝ စရိုက်မတူ အစစအရာရာ ကွဲပြားကြတဲ့ ရိုင်ရန် အမြွှာညီအမ နှစ်ယောက် အကြောင်းပါပဲ အမ အကြီးက အရာ အားလုံးကို ဇီဇါကြေါင် အသေးစိပ် လုပ်တတ်ပြီး ပညာရေးမှာ ထူးချွန်ပြီး ပညာသင်ဆုကို ရယူနိုင်ဖို့ အထိ ရည်မှန်းချက်ကြီးသူပါ အငယ်မလေးကတော့ ဖြစ်သလိုနေထိုင်တဲ့ ...
IMDB: 5.0/10 21,440 votes
IMDB: 6.3/10 69,818 votes
IMDB: 5.9/10 83,685 votes
Alexander (2004) ##unicode Macedoniaရဲ့ဘုရင် AlexanderဆိုတာကအကြီးမားဆုံးMexicanအင်ပါယာကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Presianအင်ပါယာကိုသူ့ရဲ့စစ်တပ်နဲ့သိမ်းပိုက်အနိုင်ရပြီးနောက်မှာတော့ကမ္ဘာကြီးတစ်လျှောက်ကိုချီတက်ခဲ့ကြတယ်။ သူ့ရဲ့အိမ်နဲ့ဝေးကွာတဲ့အရှေ့ပိုင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာချီတက်ခဲ့ပြီးအမည်မသိနေရာတွေကိုလဲရောက်ရှိခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာကြီးကိုတစ်စုတစည်းတည်းအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့Alexandeဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုဒီရုပ်ရှင်မှာ တွေ့ရမှာပါ။ မင်းသားချော Colin Farrellက Alexanderအနေနဲ့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးမင်းသမီးAngelina Jolieလဲပါဝင်တာမို့ အထူးတလည်တော့ မညွန်းတော့ပါဘူး။ ##zawgyi Macedoniaရဲ့ဘုရင္ AlexanderဆိုတာကအႀကီးမားဆုံးMexicanအင္ပါယာကိုတည္ေထာင္နိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ Presianအင္ပါယာကိုသူ႔ရဲ့စစ္တပ္နဲ႔သိမ္းပိုက္အနိုင္ရၿပီးေနာက္မွာေတာ့ကမၻာႀကီးတစ္ေလၽွာက္ကိုခ်ီတက္ခဲ့ၾကတယ္။ သူ႔ရဲ့အိမ္နဲ႔​​ေဝးကြာတဲ့အေရွ႕ပိုင္းကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခ်ီတက္ခဲ့ၿပီးအမည္မသိေနရာေတြကိုလဲေရာက္ရွိခဲ့တယ္။ ကမၻာႀကီးကိုတစ္စုတစည္းတည္းအုပ္ခ်ဳပ္ဖို့ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့Alexandeဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းကိုဒီ႐ုပ္ရွင္မွာ ေတြ႕ရမွာပါ။ မင္းသားေခ်ာ Colin Farrellက Alexanderအေနနဲ႔ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားျပီးမင္းသမီးAngelina Jolieလဲပါဝင္တာမို့ အထူးတလည္ေတာ့ မညြန္းေတာ့ပါဘူး။ Review – Myet Chel File Size – 1.3GB,3GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray,720p Blu-ray Duration… 2h 55min Genre :Action, Biography, Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Myet Chel Encoded by Arrow
IMDB: 5.6/10 160,262 votes
Mulan II (2004) မူလန် ၂ တောင်းဆိုနေတဲ့သူတွေ အတွက်လာပါပြီ။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ မူလန် နဲ့ ရှန်နဲ့ လက်ထပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန် လျို့ဝှက် တာဝန်တစ်ခုပေးအပ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါ ကြုံတွေ့ရမဲ့ စွန့်စားခန်းတွေအကြောင်းပါ။ အားပေးကြပါဦး။ ———————————————– မူလန္ ၂ ေတာင္းဆိုေနတဲ့သူေတြ အတြက္လာပါျပီ။ ဒီဇာတ္လမ္းမွာေတာ့ မူလန္ နဲ႕ ရွန္နဲ႕ လက္ထပ္ဖို႕ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ လိ်ဳ႕၀ွက္ တာ၀န္တစ္ခုေပးအပ္ခံလိုက္ရတဲ့အခါ ၾကံဳေတြ႕ရမဲ့ စြန္႕စားခန္းေတြအေၾကာင္းပါ။ အားေပးၾကပါဦး။
IMDB: 5.7/10 21,454 votes
Spider-Man2(2004) ကြ်န္ေတာ္ကေတာ႔ အရင္မင္းသားနဲ႔ဇာတ္လမ္းေတြကိုပုိသေဘာက်မိပါတယ္..IMDb Rate လည္း 7.3 ရရွိထားပါတယ္.. ဒီဇာတ္လမ္းမွာေတာ႔ စမိုက္ဒါမန္းဟာ မေပ်ာ္မရြင္ၿဖစ္ေနရပါတယ္.သူခ်စ္ရတဲ႕ေကာင္မေလး ေမရီဂ်ိန္း ၀မ္ဆန္ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီးတဲ႔ေနာက္မွာေတာ႔ သူ႕ဘ၀ကို ရာဇ၀တ္မွုေတြကိုတိုက္ဖ်က္ေနရင္းနဲ႕ၿဖတ္သန္း ေနရပါတယ္..ေမရီဂ်ိန္းဟာလည္း သူေငွးတစ္ေယာက္နဲ႕ေစ႔စပ္ထားလိုက္ပါၿပီ …သူ႕သူငယ္ခ်င္း ဟယ္ရီကလည္း သူ႕အေဖကိုသတ္သြားတဲ႔စပိုက္ဒါမန္းကို ၿပန္သတ္ခ်င္လို႕အသည္းအသန္စံုစမ္းေနပါ သလို ၿမိဳ႕ကိုေပးမယ္႕ အႏၱရာယ္အသစ္လည္းတိုးလာပါတယ္..ဒါေတြဘယ္လိုဆက္ၿဖစ္မလဲဆိုတာ ေဒါင္းၿပီးၾကည္႕ရွုႏိုင္ပါၿပီ
IMDB: 7.3/10 531,056 votes
The Great Challenge or Yamakasi 2
IMDB: 4.7/10 2,127 votes
District B13 (2004) ##zawgyi (၂၁)ရာစုမွာ အစိုးရက အႏၱရာယ္ရွိတယ္လို႔ယူဆရတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြကို နံရံေတြနဲ႔ အလံုပိတ္ေစခဲ့တယ္ ဒီဇာတ္ကားထဲမွာ ေလတိုတို႔ေနတဲ့ေနရာကလည္း အဲ့ဒီလိုသတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ခရိုင္(၁၃) ျဖစ္တယ္ ေလတိုက ၿမိဳ႕ရဲ႕ Drug ဂိုဏ္းတစ္ခုက တာဟာဆိုတဲ့လူနဲ႔ သြားညိွမိတယ္ သူ႔ညီမေလးကို ဂိုဏ္းကဖမ္းသြားၿပီးေတာ့ သူလည္း ေထာင္က်သြားခဲ့တယ္ ေနာက္(၆)လေလာက္ၾကာတဲ့အခါမွာ တာဟာ့ဆီကို ေရာက္လာတဲ့ ဗံုးတစ္လံုးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေဒမီယန္နဲ႔အတူ သြားျပန္ယူဖို႔ျဖစ္လာတယ္ ဒီကားမွာ ေလတိုနဲ႔ ေဒမီယန္တို႔ႏွစ္ေယာက္ အတြဲညီညီ လႈပ္ရွားသြားပံုေတြကို ရင္သပ္႐ႈေမာရေလာက္တဲ့အထိ ျမင္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ တိုက္ခိုက္ခန္းေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ Parkour အကြက္ေတြကလည္း အလန္းစားပါပဲ ေလတိုနဲ႔ ေဒမီယန္တို႔ ဘယ္လိုအဖြဲ႕က်သြားမယ္ ဗံုးကို ဘယ္လိုျဖဳတ္မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္… ##unicode (၂၁)ရာစုမှာ အစိုးရက အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ယူဆရတဲ့ မြို့တွေကို နံရံတွေနဲ့ အလုံပိတ်စေခဲ့တယ် ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ လေတိုတို့နေတဲ့နေရာကလည်း အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ခရိုင်(၁၃) ...
IMDB: 7.2/10 65,506 votes
Crash Crash ဆိုတဲ့ ဇာတ်​ကား​က​တော့ ​လော့စ်​အန်​ဂျလိစ်​မြို့​တော်​တွင်​း လူမျိုး​ရေးခွဲခြားမှု​တွေ လူ့အသိုင်​းအဝိုင်​းကြားတင်​းမာမှု​တွေကို ရိုက်​ကူးပုံ​ဖော်​ထားတဲ့ ဇာတ်​ကားပဲဖြစ်​ပါတယ်​ လူဖြူ လူမည်​းခွဲခြားမှု​တွေကြားမှာ လူဖြူ​တွေကို မုန်​းတီးပြီး အနုကြမ်​းစီးတတ်​တဲ့ Anthnoy ဟာ သူ့အ​ဖော်​နဲ့အတူ လူဖြူ​ရှေ့​နေ Rick နဲ့ သူ့ဇနီး Jean တို့ရဲ့ကားကို လုခဲ့ပါတယ်​။ ဒီဇာတ်​ကား​လေးထဲမှာ ို​သေနတ်​နဲ့ခြိမ်​း​ခြောက်​ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်​ လူမည်​း​တွေကို ​ကြောက်​ရွံ့​သွားပြီး သူ့အိမ်​မှာအလုပ်​လာလုပ်​တဲ့ လူမည်​း​​တွေကို မယုံကြည်​နိုင်​​တော့တဲ့ Jean ကျည်​ဆံသံ​တွေ​ကြား အိမ်​ခဏခဏ​ပြောင်​းခဲ့တဲ့ ​သော့ပြင်​ဆရာ Daniel ​သော့ပြင်​ဆရာနဲ့အ​ခြေအတင်​စကားများပြီး​နောက်​ လူမည်​း​သော့ပြင်​ဆရာ​ကြောင်​့ သူ့ဆိုင်​​ဖောက်​ထွင်​းခံရတယ်​ ယူဆထားသူ Farhand လူမည်​းတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​တဲ့အတွက်​ ဇနီးဖြစ်​သူကို ရဲတစ်​ဦး လက်​သရမ်​းတာကို ကြည်​့​နေခဲ့ရတဲ့ လူမည်​းရုပ်​ရှင်​ဒါရိုက်​တာ Cameron ဖခင်​ရဲ့​ရောဂါ​ကြောင်​့ ​ဆေးရုံမှတာဝန်​ရှိသူ လူမည်​းအမျိုးသမီးကို မ​ကျေမနပ်​ဖြစ်​​နေသူ ရဲအရာရှိ Ryan လူမျိုး​ရေးခွဲခြားမှု​ကြောင်​့ ဖြစ်​​ပေါ်လာတဲ့ လူသတ်​မှုတစ်​ခုကို စုံစမ်​း​နေသူ လူမည်​းစုံ​ထောက်​တစ်​​ယောက်​ဦး Graham waters စတဲ့ဇာတ်​​ကောင်​​တွေရဲ့ လှုပ်​ရှားမှု​တွေနဲ့ ​အ​မေရိကန်​လူ့အသိုင်​းအဝိုင်​းကြား ဖြစ်​ရပ်​​တွေကို ပုံ​ဖော်​ထားတာ​တွေ့ရမှာပါ။ ပါဝင်​ထားတဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​​တွေက​တော့ ခရိုင်​​ရှေ့​နေ Rick အဖြစ်​ Brendan ...
IMDB: 7.7/10 414,347 votes
Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events A Series of Unfortunate Events (2004) ======================= တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြကေတာ့ ရက္စက္အက်ည္းတန္တဲ့ ကမၻာႀကီးကို မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ရင္း ေပ်ာ္ရႊင္စရာဇာတ္သိမ္းေတြမွာ သက္သာရာ႐ွာရင္း ဘာမွမဟုတ္သလို ဘဝကို ကုန္ဆုံးတတ္ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြကေတာ့ ကမၻာႀကီးမွာ ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမွာေတြ ႐ွိေနေသးတာကိုသိၿပီး သုေတသနလုပ္ရင္း မွတ္တမ္းတင္ရင္း ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ဘဝကိုကုန္ဆုံးတတ္ၾကတယ္။ အခုဇာတ္လမ္းကေတာ့ အဲ့ဒီ အစြန္းႏွစ္ဖက္က လြတ္တဲ့လူေတြအေၾကာင္းပါ။တစ္ခုခုကို တီထြင္တာလို.. စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဖတ္တာလို..အဓိပၸါယ္႐ွိတယ္ထင္ရတဲ့ အရာေတြကေန ..ဘာမွမဟုတ္ပဲ ပစၥည္းတစ္ခုကိုလိုက္ကိုက္ ေနတတ္တာလို အဓိပၸါယ္မ႐ွိဘူးထင္ရတဲ့အရာေတြအပါအဝင္ တစ္ခုခုေတြကို လုပ္ရင္း အဆုိးဝါးဆုံး အေျခအေနေတြမွာ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္႐ွိစြာပဲ ႐ွင္သန္တတ္ၾကတဲ့ လူေတြအေၾကာင္းပါ။ သူတို႔သိထားတဲ့ အသိကေတာ့ အေျခအေန ဘယ္ေလာက္ပဲဆိုးဝါး စုတ္ျပတ္ေနပါေစ တစ္ခုခုေတာ့ အျမဲ႐ွိေနတတ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ အဲ့ဒီလူေတြကေတာ့ Baudelaire ေမာင္ႏွမသုံးေယာက္ပါ။ အႀကီးဆုံး Violet Baudelaireကေတာ့ စြန့္္ပစ္ထားတာေတြ.. ၾကားမွာ အသုံးဝင္တာတစ္ခုခုေတာ့႐ွိတတ္ၿပီး အမႈိက္ဆိုတာလည္း ေနရာလဲြမွားေနတဲ့ တန္ဖိုး႐ွိပဲ ပစၥည္းဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ထားၿပီး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကေန တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု တီထြင္ေနတတ္တဲ့ ကေလးမေလးတစ္ေယာက္ပါ။ အလတ္ျဖစ္တဲ့ Klaus Baudelaireကေတာ့ စာအုပ္ေတြၾကားမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္တဲ့ စာၾကမ္းပိုးကေလးျဖစ္ၿပီး အငယ္ဆုံးေလးကေတာ့ ေတြ႕ကရာ လိုက္ကိုက္တတ္တဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ပါပဲ။ သူတို႔ မိသားစုရဲ႕ အိမ္ႀကီးကို ဘယ္ကေနဘယ္လိုျဖစ္မွန္း မသိတဲ့ မီးေလာင္မႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္သြားၿပီး။ မီးထဲမွာ သူတို႔မိဘေတြပါပါသြားတာေၾကာင့္ သူတို႔မိဘမဲ့ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ၿပီး မိဘမဲ့ျဖစ္သြားခဲ့ရတဲ့ ကေလးသုံးေယာက္ရဲ႕ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်မႈေတြဟာ ဒီတစ္ခုနဲ႔ ...
IMDB: 6.8/10 191,792 votes
Eternal Sunshine of the Spotless Mind Eternal Sunshine of The Spotless Mind IMDb…8.3,,,,Rotten…93 ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ေတြ အရြယ္ေလးရ အသိဥာဏ္ေလးစဖြံၿဖဳိးလာတဲ့အခ်ိန္ကစလုိ႕ အနည္းအမ်ား အနာဂတ္အတြက္အစီအစဥ္ေတြဆြဲၾကတယ္အထူးသျဖင့္စီးပြားေရး အခ်စ္ေရးေတြေပါ့…တစ္ခ်ဳိ႕ေသာအရာေတြဟာ အစီအစဥ္အတုိင္းျဖစ္ေပမယ့္္ အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ တက္တက္ စင္ေအာင္လြဲမွားမႈေတြရွိတတ္တယ္ ဘာလုိ႕ဆုိ ႏွလုံးသားက ဦးေဏွာက္ကုိလႊမ္းမုိးႏုိင္စြမ္းရွိလုိ႕ပါပဲ အခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္မလုပ္ႏုိင္ဘူးထင္တာေတြလုပ္ရဲလာတယ္ မေၾကာက္သင့္တာေတြကုိေၾကာက္တတ္လာတယ္….ခ်စ္သူ ၂ ဦးအဖုိ႕ ေမြးဖြားရာပတ္၀န္းက်င္မတူ ရပ္တည္ပုံခ်င္းမတူဆုိေတာ့ ေရရွည္မွာ အထုိက္အေလွ်ာက္ အယူအဆေတြလြဲမွားလာၾကတတ္တယ္…..ဒီလုိအခ်ိန္မွာ နားလည္မႈဆုိတဲ့ေ၀ါဟာရဟာေပ်ာက္ဆုံးေနတတ္တယ္… သိပ္ခ်စ္ေပမယ့္ လမ္းခြဲလုိက္ရတဲ့အခါမွာ သူနဲ႕ပတ္သက္သမွ်အတိတ္ကအမွတ္တရေတြအားလုံးကုိေမ့ပစ္ခ်င္ၾကတယ္ ဒီကားထဲက Joel နဲ႔ Clementine ဆိုတဲ့ စံုတြဲေလးက ခ်စ္စအခ်ိန္မွာေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြျပည့္ႏွက္ေနေပမယ့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာတာနဲ႔အမွ် ျပသနာေသးေသးေလးေတြ အဖုအထစ္ေလးေတြ ၾကံဳလာရပါေတာ့တယ္။ အဲ့လိုအခ်ိန္မွာ ေအးေအးေ ဆးေဆးသမား စကားနည္းတဲ့ Joel နဲ႔ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ Clementine တို႔ႏွစ္ေယာက္ ေဝးကြာသြားခဲ့ၿပီး ကိုယ့္လက္တြဲေဖာ္ကို ကိုယ့္မွတ္ဉာဏ္ေတြထဲကအၿပီးထုတ္ပစ္ဖို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ႀကိဳးစားလာပါေတာ့တယ္..မွတ္ဥာဏ္ဖ်က္ေပးတဲ့သိပံပညာရွင္ဆီမွာအကူအညီေတာင္းတယ္. မွတ္ဉာဏ္ေတြ ဖ်က္ပစ္တဲ့အခါ ဝမ္းနည္းစရာ၊ ျပသနာျဖစ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကာလေတြအျပင္ ေပ်ာ္ရႊင္ရယ္ေမာခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြကိုပါ ဖ်က္ဆီးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ Joel တစ္ေယာက္ ...
IMDB: 8.3/10 880,215 votes